के आमिर खान तेस्रो पटक बिहे गर्दै छन्? :: एजेन्सी :: Setopati
सोमबार, असार १३, २०७९
के आमिर खान तेस्रो पटक बिहे गर्दै छन्?
मुम्बई, मंसिर ५
तीन महिनाअघि अभिनेता आमिर खानले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य घोषणा गरेका थिए। उनी र उनकी श्रीमती किरण रावले सार्वजनिक रुपमा सम्बन्ध-विच्छेद गरेको सूचना दिएका थिए। फिल्ममेकर किरण आमिरकी दोस्रो श्रीमती थिइन्।
उनीहरु सन् २००५ मा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका थिए र बलिउडमा रुचाइने जोडीमध्ये पर्थे। अहिले आमिर र किरण सम्बन्ध-विच्छेद पछि पनि खुसी देखिन्छन्। उनीहरु आफ्ना छोरा आजादका लागि भने सँगै समय मिलाइरहेका छन्।
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आमिरको तेस्रो बिहेबारे चर्चा सुरु हुन थालेको छ। आमिरका प्रशंसकहरु उनले आफ्नो तेस्रो बिहेको घोषणा गर्ने प्रतिक्षामा छन्। सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलिएअनुसार आमिरले आफ्नो बिहेको घोषणा उनको नयाँ फिल्म ‘लाल सिंह चड्डा’को रिलिजपछि गर्नेछन्। फिल्मबाट कसैको ध्यान नहटोस् र बक्स अफिसमा फिल्मबारे आउन सक्ने आलोचना वा विवाद रोक्न उनले बिहेको कुरा अलिपछि ल्याउने अनुमान छ।
यतिमात्रै होइन, आमिरले पहिले फिल्ममा सँगै अभिनय गरेको आफ्नै सहकर्मी अभिनेत्रीसँग तेस्रो बिहे गर्ने चर्को हल्ला छ। उनको र किरणको सम्बन्ध-विच्छेदपछि सामाजिक सञ्जालमा आमिरको फिल्म ‘दंगल’की अभिनेत्री फातिमा साना शैखको नाम ट्रेन्डिङमा आएको थियो। प्रशंसकहरुले फातिमाकै कारण आमिर र किरण छुटिएको हुन सक्ने अनुमान लगाएका थिए।
तै यो हल्ला केही समयमा रोकिएको थियो। फातिमा र आमिर एकअर्कासँग निकै नजिक छन्। दंगल फिल्ममा फातिमाले आमिरको छोरीको भूमिका खेलेकी थिइन्। आमिर उनलाई राम्रो अभिनेत्रीमध्ये मान्छन् र यता फातिमा भने आमिरलाई आफ्नो गुरु मान्छिन्। उनीहरुले ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ फिल्ममा पनि सँगै अभिनय गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ५, २०७८, ०४:०९:४५
दूध बेच्छन् मल पनि बेच्छन्, परिवार पाल्छन् बचत पनि गर्छन् काल्तडीका भैंसी किसान
डडेल्धुराका कम्प्युटर अपरेटरमाथि कैलालीमा आक्रमण, गाडी र पैसा लिएर भागे आक्रमणकारी
कैदीबन्दीको मतदाता नामावली संकलन गर्न सर्वोच्चको आदेश
स्थानीय करबारे जनप्रतिनिधिहरूले थाहा पाउनुपर्ने ८ कुरा
कप्तान रूबिना भन्छिन्- खेल हाम्रो राम्रै हो, वर्षाले पूरा हुन दिएन एसिया कप खेल्ने सपना
एकीकृत समाजवादीका चार मन्त्रीले लिए सपथ (तस्बिरहरू)
योगेशले भने- माधव नेपाल दुई सय वर्ष बाँच्नुहोस्, पदमा रहिरहनुहोस्
गायिका दिलमायाका परिवारले दिए सूर्यविरूद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी
आम्दा अस्पतालले लिन्छ सामान्य सुत्केरी गराएको १० हजार, टेर्दैन सरकारको नीति
शाहरूख खान अभिनित ‘पठान’ को फस्ट लुक्स पोस्टर कपि!
पुष्पा-२ को कहानी रिलिज अगाडि नै लिक!
लिक भयो रणवीर कपुरको शमशेरा लुक
यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा महँगा निर्देशक
लागूऔषध सेवन आरोपमा पक्राउ परेका शक्ति कपुरका छोरा सिद्धान्त रिहा
यी हुन् रोगसँग लडिरहेका बलिउड हस्तीहरू
नेपालको विकास गर्न निम्स दाइको मोडल विश्वास गौचन
समुदायले आफ्नो भनेर जोगाएको गोदावरी-फूलचोकी वनमा हस्तक्षेप किन? घनश्याम पाण्डे
लौ न मलाई स्कुटर किन्दिनै पर्‍यो! मिमांशा ढुंगेल
मेलम्ची बाढीलाई फर्केर हेर्दा... प्रेरणा पराजुली
स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउन सक्ने तीन सजिला उपाय टिकाराम निरौला
मर्ने बेलासम्म त यो शरीर... राकेश कार्की
बढेको बढेकै छ! बिन्दु अधिकारी
ढुकढुकी अझै बाँकी छ कि भनी... रामबहादुर सिंखडा
नजन्मेको छोरालाई बाबुको पत्र! गोविन्द कामी
मेरो प्यारो पनौती साकुरा बन्जारा
यात्राको विकल्प एक्रेलिक पेन्टिङ केनिशा अधिकारी
उज्यालोभित्र चियाउँदा अनुषा उप्रेती
मेरो छाता सोनुश्री पौडेल